कोरोना भाइरसबाट चीनको वुहानमा अमेरिकी नागरिकको मृत्यु – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
लकडाउनको स्वोरुप अब यस्तो हुदै; सेना परिचालन देखि पठनपाठन सम्म !
कोरोना भाइरसबाट चीनको वुहानमा अमेरिकी नागरिकको मृत्यु
अर्थ राजनीतिप्रकाशित मिति : २५ माघ २०७६, शनिबार February 8, 2020
बेइजिङ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकी नागरिककाे मृत्यु भएकाे छ। चीनको वुहान शहरमा बसोबास गर्ने ती ६० वर्षे अमेरिकी नागरिकको त्यहाँको जिन्यिन्तान अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बेइजिङस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
उनको परिवारको गोपनियतालाई सम्मान गर्दै उनीबारे थप विवरण भने दूतावासले सार्वजनिक नगरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, वुहान शहरमै अर्का जापानी नागरिकको समेत मृत्यु भएको छ । जापानको विदेशमन्त्रालयलले ६० वर्ष उमेर समूहमा रहेका उनको कहिले मृत्यु भएको भन्नेबारे केही खुलाएको छैन । निमोनियाबाट पीडित ती जापानी नागरिकको पनि कोरोना भाइरसबाट नै मृत्यु भएको आशंका गरिएपनि उनीमा भाइरस देखिएको पुष्टि नभएको बताइएको छ ।
महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसबाट चीनमा शनिबार ८६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यससँगै कोरोना भाइरसबाट चीनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ७२२ पुगेको छ । त्यस्तै भाइरसको संक्रमण देखिएका मानिसहरुको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।
शनिबार थप ३ हजार ३ सय ९९ जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण देखा परेको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएका छन् । यससँगै कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको सङ्ख्या चीनमा ३४ हजार ५ सय ५६ पुगेको छ ।
चीनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ सय २२ पुग्यो, ३५ हजार संक्रमित
सरकारको निर्देशनमा अख्तियारले गच्छदारलाई फसाउन खोज्यो : नेता सिंह
बलात्कारमा सजाय बढ्यो साथै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजाए
आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ उत्कृष्ट कर कार्यालय बन्न सफल
काठमाडौंमा काली पराजुली र भक्तपुरमा प्रेम भट्टराई नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी
लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको ट्युसन पढाउन सरकारी कर्मचारीले स्वीकृति लिनुपर्ने
कोरोना संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु
वरिष्ठ सर्जन डा. ध्रुव शर्मा मुडभरीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
गत वर्षको नाफाबाट सनराइज बैंकले ८.२५ प्रतिशत लाभांश दिने
कुमारी बैंकले लाभांश पारित गर्न